आँधीखोला खवर | निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित, केके थपिए नयाँ व्यवस्था ? - आँधीखोला खवर निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित, केके थपिए नयाँ व्यवस्था ? - आँधीखोला खवर
निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित, केके थपिए नयाँ व्यवस्था ?
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था :
उमेर हद ६० वर्ष :
काँग्रेसको फरक मत :
स्थायी कर्मचारीलाई खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद लागू गर्न नहुने पनि काँग्रेसको माग छ । साविकका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा कायम गर्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा यथावत हुनुपर्ने पक्षमा काँग्रेसको फरक मत छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।